Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Talyaaniga » Wasaaradda Dalxiiska ee Talyaaniga ayaa ugu dambeyntii soo celisay ayuu yiri Madaxweynaha BMT
Nooca hawo-furan iyo shaqsi ahaaneed ee Dalxiiska Dalxiiska Mediterranean ee BMT ee Naples, illaa iyo hadda waa martida kaliya ee safarka u furan dadweynaha Talyaaniga sanadkii 2021.
Natiijooyinka Is-weydaarsiga Dalxiiska ee Mediterranean-ka ee la qabtay Juun 18 illaa 20, 2021, waxay ahaayeen sidii la filayay ee la xiriira soo-bandhigayaasha iyo inta badan xirfadleyda ka qaybgalaysa dadweynaha.
Wasiirka Dalxiiska ayaa ku amaanay Madaxweynaha BMT sida uu hormoodka uga yahay qorshahan muhiimka ah.
Wasiir Garavaglia wuxuu balan qaaday inuu dowlada u soo bandhigi doono sharciga canshuuraha laga qaado ururada dalxiiska iyo waliba shaqaalaha xilliyada dalxiiska.
Wasiirka dalxiiska Massimo Garavaglia ayaa goobjoog ka ahaa furitaankii shirkadda BMT wuxuuna ku ammaanay dhiirrigeliyeha munaasabadda iyo madaxweynaha shirkadda BMT, Angel de Negri, geesinimada ay u muujiyeen dadaalka muhiimka ah. Wasiirka ayaa ku qanciyay suurtagalnimada soo kabashada tartiib tartiib ah mahadnaq sidoo kale qorshaha talaalka. Waxa kale oo uu kordhiyay dammaanad qaadka cashuur dhaafka shaqaalaha shaqaalaynta hawlwadeennada dalxiisyada bilowgii sannadka 2021 iyadoo loo kordhiyay ballanqaadka illaa 3 sano ah.
Iyada oo laga jawaabayo codsiyo loo soo diray Italy Wasaaradda Dalxiiska ee taageerada maaliyadeed ee ururada dalxiiska, Garavaglia, markay ogaatay halista dhibaatada, waxay qaadatay ballanqaad dhab ah oo loo baahan yahay si loo kordhiyo cashuur bixinta horay loogu siiyay qaybaha kale ee shaqada iyo inay sidoo kale khuseyso shaqaalaha dalxiiska xilliyada. Wuxuu ballanqaaday inuu u soo bandhigi doono dowladda wax ka beddel iyo in la hubiyo dhaq-dhaqaaqa sida ugu dhaqsaha badan. Ujeedadu waxay ahayd in la bixiyo cashuur dhaaf taas oo waxtar u yeelan doonta dhiirigelinta qorista iyo daaweynta mushaharka soo jiidashada leh, “ugu yaraan la tartanta dakhliga muwaadinimada.”
Wasiir Garavaglia wuxuu intaas ku daray: “Istat [Machadka Qaranka ee Tirakoobka Talyaaniga] wuxuu rajeynayaa kororka waxsoosaarka bisha Sebtember inuu kordho + 4.7 boqolkiiba, waana howlwadeennada dalxiiska ee sameeya wax soo saarka. Annagu haddaan nahay dowladda waa inaan caawinnaa iyaga. Waa inaan furnaa qulqulka, maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan yeelano macaamiil. Hadda baasaaboorka cagaaran, waxaan leenahay sharciyo cad oo lagu daray Schengen, Mareykanka, Kanada, Israel ayaa lagu daray. Dhanka kale, waa inaan bilownaa inaan kordhino xilliga dalxiiska waqtiga iyo booska. Markaa waxaa jira sharad weyn oo soo kabashada: 2.4 bilyan oo noqota 5 oo leh saameynta ka faa'iideysiga. ”
Pier Ezhaya, Madaxweynaha ASTOI (Ururka Ganacsatada Dalxiisyada Dalxiiska) iyo Franco Gattinoni ee FTO (Xiriirka Dalxiiska Abaabulan) labaduba waxay muujinayaan isbedelka wanaagsan ee dalabka dalxiiska gudaha waxayna dowladda ka codsanayaan inay taageeraan isbeddelka iyo furitaanka marinnada dalxiiska si loo oggolaado macaamiisha inay u safraan meeshii ay doonaan. Waxay yiraahdeen hadda waxay ka shaqeyn karaan Talyaaniga, Giriigga, iyo Isbaanishka, laakiin tani waa kaliya boqolkiiba 15 ee soo noqoshada dalxiiska abaabulan, iyo howlaha socdaalka ee suuqyada shisheeye waa lagama maarmaan.
Markii uu soo xirayay, Madaxweynaha BMT de Negri wuxuu yiri: “Tani ma ahan carwo dhaqameed, laakiin waa isu imaatin qoys, oo taariikhda gali doona. Waxaan aad ugu kalsoonahay Wasaaradda Dalxiiska. La'aanteed, waaxdeenu mustaqbal malahan. Martiqaadka ayaa ah in la rumaysto wasaarad aakhirkii soo noqotay. ”